Funda i-Geology: Amanothi, ilukuluku nezincazelo eziningiliziwe | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kulesi sigaba sizokhuluma ngezihloko ezahlukahlukene mayelana i-geology yeplanethi yomhlaba. Sizofunda ngezinqubo ezahlukahlukene zokwakheka komhlaba ezenzeka ezingxenyeni zangaphakathi zomhlaba nangaphandle. Ubuso bomhlaba bungaphansi kwesenzo sezinto ezahlukahlukene zomhlaba esizofunda ngazo. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukwazi izinhlobo zamatshe akhona, ukuthi akhiwa kanjani kanye nokuhlukaniswa okuphelele.
Impela unamathele kumanothi akho avela esikhungweni / eyunivesithi futhi udinga ukusunduza okuncane ukucacisa ukungabaza onakho. Kuzindatshana esizishicilelayo sihlala sizama ukuchaza izinto ngemininingwane engcono kakhulu futhi ngendlela ecacile, elula nejabulisayo. Ngale ndlela ulwazi lufakwa ngaphakathi kangcono kakhulu futhi ungafunda kabanzi ngeplanethi yethu kanye nokwakheka kwayo.
I-Geology Kuyisayensi ephethe ukutadisha hhayi imvelaphi kuphela, kepha nokuvela koMhlaba, ukwakheka kwangaphakathi nangaphandle nazo zonke izinqubo ezenziwayo. Kuyisayensi ethokozisa kakhulu ngoba ungawazi kahle umhlaba ohlala kuwo nokuthi wenziwe kanjani. Ungafunda futhi ngezinto ongeke uzibone ngamehlo akho, njengaso sonke isakhiwo sangaphakathi soMhlaba nokwakheka kwawo.
Kuzo zonke izindatshana ezikulesi sigaba kufanele uzicabangele ngaso sonke isikhathi isikhathi sokuma komhlaba. Ngale ndlela ungaba nomqondo ongcono wesikhathi esithathwa yiplanethi yethu ukwenza ngokuqhathaniswa nezinga lempilo yomuntu.
Ngiyethemba ukuthi ungazithokozela zonke izindatshana esizishicilelayo kulesi sigaba nokuthi singakusiza ngangokunokwenzeka ukuze i-geology ibe yisayensi emnandi.
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinsuku ze-5 .
Kuwo wonke umlando, abantu bebelokhu bezibuza ukuthi zakhiwa kanjani izilwandle. Ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, kwakukholelwa ukuthi...
Yini iqoqo leziqhingi
Eplanethini yethu kukhona ukwakheka okuhlukahlukene kokuma komhlaba okunezici ezihlukile ngokuya ngemvelaphi yazo, i-morphology, uhlobo lwenhlabathi, njll.
Izintaba-mlilo ezinye zezindlela ezihlaba umxhwele kakhulu zokuma kwezwe, nakuba ukuqhuma kwazo ngezinye izikhathi kungase kubeke...
Amatshe e-Metamorphic yiqembu lamadwala akhiwa ukuba khona kwezinye izinto ngaphakathi...
Ngenxa yemvelaphi yayo yesiNahuatl, igama layo lisho “intaba ebhemayo”, ngenxa yokuphakama kwayo iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke eMexico ngemuva…
I-Chicxulub crater iyi-voltage crater etholakala eduze kwedolobha lase-Chicxulub e-peninsula ye-…
Iwa yisici sendawo esithatha isimo somqansa. Ngalo mqondo, ingavela ku...
Wenzani isazi sokuma komhlaba?
Ngaphakathi kwesayensi efunda iplanethi yethu kukhona i-geology. Umuntu ofunda futhi azilolonge ku-geology…
Uma sibheka izakhi ezisetafuleni le-periodic, eziningi zazo zihlala futhi zibizwa ngokuthi umhlaba ongavamile. Ise...
I-Cliff of the Giants
I-Los Gigantes cliff izimangaliso ze-volcanic geological ezitholakala entshonalanga yeTenerife, eCanary Islands, eSpain. Isayithi liqukethe...
IMount Saint Helens iyintaba-mlilo eqhubekayo eNyakatho Melika, ekhuphuka ngendlela emangalisayo engxenyeni eseningizimu-ntshonalanga ye…